Funda isiNgesi okanye isiFrentshi eCanada - iBLI yesikolo soLwimi eCanada
Inkqubo yeelwimi ezimbini
Abantu abadala kunye nabantu abadala abancinci
Ukulungiselela uviwo lwe-TEFAQ
Inkqubo yokuQala kunye neSikolo samabanga aphakamileyo
IPrince Edward Island
IYunivesithi yasePrince Edward Island (i-UPEI)
IYunivesithi yaseSaint Michael's College
Iziko loLawulo lweManhattan (MIM)
I-TEF Canada kunye ne-TEFAQ
Kuhlala kwa bafundi
Usuku lokuqala lweeklasi
Emva kwemisebenzi yeSikolo
FLAP | Ikhempu yehlobo
Inkampu yolwimi ekwi-Intanethi
Ngaba uphetha iilwimi ezimbini?Funda isiNgesi okanye isiFrentshi
Funda isiNgesi okanye isiFrentshi eCanada kwaye ube yinxalenye yosapho lweBLI.
Siye sanceda amawaka abafundi ukuba bafunde isiNgesi nesiFrentshi eCanada.
Funda isiNgesi okanye isiFrentshi eKhanadaIncwadi ngoku - Funda kamva
Ukuba uhlala uphupha ngokufunda phesheya, lo ngumzuzu ofanelekileyo wokwenza.
I-BLI Canada ibonelela ngezaphulelo ezimangalisayo onokuthatha ithuba kuzo
ukuba ufuna ukufunda isiNgesi okanye isiFrentshi eCanada!
Bhukisha ikhosi yakho ngoku kwaye uqale kumhla ozayo, xa yonke into ibuyele esiqhelweni.
Ngaba ufuna ukufunda kwintuthuzelo yekhaya lakho?IsiNgesi kunye nesiFrentshi kwizifundo ze-Intanethi
Zonke iinkqubo ezikhoyo
Funda isiNgesi okanye isiFrentshi eCanada nokuba awunakuba lapha.
Thatha iikhosi zesingesi okanye ezesiFrentshi kwi-Intanethi nootishala baseKhanada
kwigumbi lokufundela elenza inkcubeko elinenkcubeko kunye nokuphucula izakhono zakho zolwimi.
Unokukhetha kwizinto ezimbini onokukhetha kuzo:
Qala ukufunda isiNgesi okanye isiFrentshi kwi-Intanethi kwaye ugqibezele inkqubo yakho eCanada
okanye uye nje ukhetho lwe-intanethi.
Fumanisa inqanaba lakho lesiNgesifree
Nokuba ufuna ukufunda isiNgesi eCanada kodwa awazi ukuba kungakuthatha ixesha elingakanani
ukufunda okanye ukwazi ulwimi, okanye ukuba nje ufuna ukwazi inqanaba lesiNgesi,
Unokuthatha uvavanyo lwethu lwenqanaba lamahala lesiNgesi kwaye ufumanise namhlanje.
Thatha uvavanyo lwenqanaba
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba yintoni inqanaba lesiFrentshi?free
Fumanisa ukuba lingakanani inqanaba lesiFrentshi ngokuthatha uvavanyo lwakho lwenqanaba lamaFree.
Nokuba ufuna ukufunda isiFrentshi eCanada kodwa awazi ukuba kungakuthatha ixesha elingakanani
ukufunda okanye ukwazi ulwimi, okanye ukuba nje ufuna ukwazi inqanaba lakho lesiFrentshi,
Unokuthatha uvavanyo lwethu lwenqanaba lamaFrentshi asimahla kwaye ufumanise ukuba namhlanje.
IsiNgesi kunye nesiFrentshi sokuFunda kwi-IntanethiFunda isiNgesi okanye isiFrentshi kwi-intanethi
Bhalisa namhlanje kwaye
fumana iipesenti ezingama-50
Funda isiNgesi okanye isiFrentshi kwinduduzo yekhaya lakho. Ukuba uchaphazelekile yimeko yangoku yehlabathi, ungaqala inkqubo yakho ekhaya kwaye uyigqibe eCanada nje ukuba yonke into ibuyele esiqhelweni.
Ukuba awunazicwangciso zokuza eCanada kwixa elizayo, unokuxhamla nakuzo.
UkuFunda kwi-IntanethiIINKCUKACHA ZE-ONLINE
Izikolo zeeLwimi eCanadaFunda isiNgesi okanye isiFrentshi eCanada
Ukuba ufuna esona sikolo silungileyo ukuze ufunde isiNgesi okanye isiFrentshi eCanada, usendaweni efanelekileyo.
I-BLI Canada inenkqubo oyifunayo. Sinikezela ngezifundo zesiNgesi nesiFrentshi eMontreal naseQuebec City kuwo wonke umntu. Kungakhathaliseki ukuba yintoni injongo yakho, kwi-BLI siya kukunceda ufezekise.
I-BLI iqinisekisa ukuba uya kufumana iziphumo ozifunayo. Siza kukunceda ufezekise iinjongo zakho ngaphandle kweenjongo zakho. Nokuba injongo yakho kukufunda isiNgesi okanye isiFrentshi ngokubanzi, kwizifundo, kwishishini, okanye kwiinjongo zokuvavanya, siya kukunceda ufike apho.
Sinezifundo ezininzi ezahlukeneyo kuwo onke amanqanaba kwiimodyuli ezahlukeneyo. Nokuba ungumfundi wokuqala okanye umfundi ogqithileyo ofuna ukugqibezela izakhono zakho zolwimi kwindawo ethile, ootitshala bethu baya kukuxhasa ngale ndlela yokufunda.
SineNkqubo efanelekileyo kuweIinketho zeNkqubo
Iikhosi zesiNgesi eMontreal okanye kwi-Intanethi. Funda isiNgesi kwaye uphuhlise izakhono ezine eziphambili zolwimi: ukuthetha, ukufunda, ukumamela nokubhala ngokuchanekileyo usebenzisa igrama, isigama kunye nesandi.
Izifundo zaseFrance eMontreal, eQuebec City okanye kwi-Intanethi. Ziqhelise ukunxibelelana ngendlela ezenzekelayo kunye nendalo kwaye ufunde indlela yokubonisa iingcinga zakho kunye nemibono ngokutyibilika nangokuchaneka kwiimeko ezahlukeneyo.
IIKHOSI ZOKUFUNDA IELWIMI
Funda isiNgesi okanye isiFrentshi kwi-Intanethi. Iiklasi ze-BLI ezikwi-Intanethi zifundiswa bukhoma ngootitshala bethu abaqhelekileyo, kugxilwe kwizakhono zonxibelelwano. Iiklasi zigcinwa kwiqonga lethu lokufundisa.
Ikhosi yethu yokulungiselela i-IELTS iya kukubonelela ngesingeniso kwisakhiwo soviwo lwe-IELTS
Ikhosi yokulungiselela ye-BLI TEFaQ ijolise ekukuncediseni ukuphucula izakhono ozifunayo ukuze uphumelele kwiimodyuli zomlomo kunye nokumamela kovavanyo lwe-TEFaQ.
Inkqubo yesiNgesi ye-BLI yesingesi iya kukufundisa ubuchule obujolise kumakhondo omsebenzi. Ekupheleni kwenkqubo
Inkqubo ye-BLI yeshishini laseFrance iya kukufundisa ubuchule obujolise kumakhondo omsebenzi. Ekupheleni kwenkqubo
Ukuba awunalo ixesha lokuzibophelela kwishedyuli yexesha elizeleyo ungabhalisa kwenye yezifundo zethu zesiNgesi nesiFrentshi ezinikezelwa ngexesha langokuhlwa kwaye uqale ngokuphucula izakhono zakho zolwimi namhlanje.
Iinkqubo zekhempu yaseBLI FLAP zinika amava amnandi phesheya ukudibanisa isiNgesi nesiFrentshi ngezinto ezahlukeneyo ezinomdla kwindawo ekhuselekileyo nenenkathalo.
Iikhosi ezimbini zeeLwimi
Inkqubo ye-BLI yeelwimi ezimbini ikunika ithuba lokuba ufunde, uphonononge kwaye uqhelanise yonke imiba yokufunda ulwimi, ugubungela omane
Inkqubo yethu yonke ebandakanyayo ikunika amava awodwa, ekuvumela ukuba uphucule izakhono zakho zolwimi ngesiNgesi okanye ngesiFrentshi.
Ishedyuli yethu yempelaveki yenzelwe ukuba ihambelane nendlela yakho yokuphila exakekileyo kunye neemfuno.
Iinkqubo zeqela le-BLI zibonelela ngamava amnandi aphesheya ukudibanisa isiNgesi nesiFrentshi ngezinto ezahlukeneyo ezonwabisayo kwindawo ekhuselekileyo nenenkathalo.
UKUZALWA KWAKHO EKUFANELEKILEIinkqubo zeNdlela
Ngaba ungathanda ukufunda eCanada kwiziko elingemva kwesekondari kwaye ngenxa yoko ungumhlali waseCanada?
I-BLI yenza le nkqubo ibe lula kakhulu. I-BLI Canada ineemvumelwano nenani elikhulu okanye amaziko abonelela ngemfundo yasemva kwesekondari. Ukuba uthatha inkqubo ye-BLI yendlela, uya kufumana uqeqesho oludingayo ukufikelela kwinqanaba lolwimi olufanelekileyo olufunekayo ukuqala inkqubo enje, kodwa okona kubaluleke kakhulu, uya kukulungela ukuphumelela kanye xa uqala izifundo zakho zasesekondari.
Ukuthatha inkqubo ye-BLI yendlela eya kukunceda ukuphucula ulwazi lwakho lokufunda kunye nezakhono zokubhala. Ukongeza, uya kufunda ngeendlela zophando kunye neendlela zokuxoxa eziya kuba luncedo kwakamsinya nje ukuba uqalise izifundo zakho kwesinye sezikolo ezisebenzisana nathi.
Izikolo zethuIZIBONELELO ZOKUGQIBELA ezimbini
Funda isiNgesi okanye isiFrentshi eKhanada. Ukuba ufuna ukufunda isiFrentshi unokukhetha phakathi kwesiLwimi sethu eMontreal kunye nesikolo sethu saseFrance kwiQuebec City. Ukuba ufuna ukufunda isiNgesi, iBLI Montreal ilinde wena
Ngaba unayo imibuzo
I-Suite 400, i-70 Rue Notre Dame Ouest
NgoMvulo-ngolwesiHlanu: 8:30 AM - 5 PM
Uvavanyo lokufakwa kwesiNgesi
Uvavanyo lokubekwa eFrance
Yiba ngumndwendwe osapho
© 2020 BLi Canada. Onke amalungelo agciniwe.